अशेष घिमिरे « Janata Samachar
Tag: अशेष घिमिरे
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग कुटनीतिक मूल्य र आचारसंहिता विपरित भेटेको र यस्तो कार्यबाट राष्ट्रिय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र कुटनीतिक ओझ गिर्ने काम भएको श्रेष्ठकाे भनाइ छ ।
‘मैले जबज मानेको पनि छैन र विरोध गरेको पनि छैन’
यतिबेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नो आन्तरिक अन्तसंघर्षलाई व्यवस्थापन गर्ने र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुुल ध्येयमा छ । पार्टी र
महामारी मुकाबिला : अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो
पूँजीवादी व्यवस्था पूँजी र व्यवसायलाई मात्र महत्व दिन्छ । व्यक्तिको हित उसका लागि कुनै माने राख्दैन । यसरी विशुद्ध नाफाका लागि मात्र सबै उत्पादन र तयारी केन्द्रित गर्ने नवउदारवादका नाममा
‘सुन्नुस् राम्रोसँग ! समाजवाद कांग्रेसकै एजेण्डा हो’ (भिडियोसहित)
आर्थिक वर्ष २०७६, ०७७ को बजेट सिद्धान्त निबन्ध जस्तो छ । सरकारको करोडौ बजेट जोगाउन विगतमा सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गरिएको हो ।
कन्हैया चुनावमा ३० घण्टा
भारत विहारकोे बेगुसराय क्षेत्रबाट भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको उम्मेद्वार बनी खडा भएका छन् कन्हैया कुमार ।
एउटा जमिनदारले शोषण गरिरहेको किसानको दुःख नबुझ्नुको कारण ऊ आफ्नो के गर्दा हित हुन्छ भन्दै सोचेर दृष्टिकोण बनाइरहेको हुन्छ ।
विदेशीको प्रभावमा हिन्दूधर्म समाप्त गर्न पाइन्छ ?(भिडियोसहित)
२०६२,०६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त भइसकेको छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासहितको गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीले हिन्दूराज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको ऐजण्डा जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको छ
राष्ट्र रहे न राष्ट्रपति भइन्छः कमल थापा
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्र रहे मात्र नेताहरु राष्ट्रपति हुने अवस्था आउने बताउनु भएको छ । राजनीतिमा राजतन्त्रको वकालत गरिरहनु भएका थापाले राष्ट्र संकटमा परेको बताउनु भएको छ
नयाँ लय समातेको नयाँ शक्तिलाई धेरैले बुझेनन् (भिडियोसहित)
डा. बाबुराम भट्टराई दिग्गज राजनीतिज्ञ । नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति शुरु गर्नुभएका भट्टराईले राजनीतिक व्यवस्था र समाज परिवर्तनको लागि मुलुकमा १० वर्ष सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी)ले
‘विश्व पूँजीवादविरुद्ध सबै समाजवादी एक हुनुपर्छ’ (भिडियोसहित)
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरी वरिष्ठ समाजवादी चिन्तक हुनुहुन्छ । समाजवादी चिन्तक गिरीले समाजवाद कति सपना कति यथार्थ, समाजवादको भविष्य, समाजवाद पूँजीवाद टकराव, नेपालका दलमा देखिएको सैद्धान्तिक संकट, नेपालको संविधान